यू–१६ विजेता क्रिकेटरलाई जनही २० हजार दिने क्यानको घोषणा
काठमाडौ, ४ भदौ । घरेलु मैदानमा मलेसीयालाई हराएर एसीसी यू–१६ प्रिमियर क्रिकेटको च्याम्पियन बनेको नेपाली टोलीका सदस्यहरुलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले जनही २० हजार दिने घोषणा गरेको छ । खेलाडीहरुको प्रत्साहनका लागि नगद पुरस्कार...
सार्क सम्मेलनका लागि कस्तो बन्दैछ काठमाडौँ ?
काठमाडौ, ४ भदौ । आगामी मङ्सिर १० र ११ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौँ शिखर सम्मेलन तयारीको सिलसिलामा सहरी सौन्दर्य र हरियाली कायम गर्न सरसफाइ तथा नगर...
फेसबुकबाट सेक्स पार्टनरको प्रस्ताव राख्ने युवक प्रहरी फन्दामा
काठमाडौं, ४ भदौं । सुरुमा महिलाको नामबाट फेसबुक एकाउन्ट खोलेर साथी बनाउने र सेक्स पार्टनरको प्रस्ताव राख्ने एक युवक पक्राउ परेका छन् । सिन्धुली जलकन्या २ घर भइ हाल लाजिम्पाट बस्ने ३० वर्षका स्याङ्गवोलाई...
वोटलाई मार्ने बाघ निकुञ्जले नियन्त्रणमा लियो
रत्ननगर (चितवन), ४ भदौ । चितवन निकुञ्जका कर्मचारी हरिचन्द वोटलाई आक्रमण गरी मार्ने बाघलाई निकुञ्जले नियन्त्रणमा लिएको छ । हिजो निकुञ्जको कार्यालयस्थित गिद्ध प्रजनन केन्द्र अगाडि सफा गर्दै गर्दा उक्त बाघले वोटलाई मारेको थियो...
एमाओवादी सभासदहरुलाई बाढी प्रभावित क्षेत्र जान निर्देशन
काठमाडौँ, ४ भदौ । एमाओवादीले आफ्ना सभासदहरुलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटाउने निर्णय तयारी गरेको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले सभासदहरुलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने निर्णय गरेको हो । एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको...
इबोला भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न पर्सामा पनि ‘हेल्थ डेस्क’
पर्सा, ४ भदौ । इबोला भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहन पर्सामा पनि विशेष सतर्कता अपनाइएको छ । वीरगन्ज नाका हुँदै नेपाल आउने पर्यटकसँगै इबोला भाइरसको सङ्क्रमण भित्रिने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साले...
‘विदेशीको मान्छे’ भन्दै सिटौलालाई हटाउने सुशीलको तयारी, अब शेखर वा शशांक महामन्त्री !
काठमाडौं, ४ भदौ । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला असन्तुष्ट भएका छन् । कोइराला सिटौलासँग किन रुष्ट बनेको भन्ने यकिन कारण भने खुल्न सकेको छैन । तर,...
नेपालको घरेलु टोली मलेसियासामू १६२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत
काठमाडौं, ४ भदौ । मलेसीयामा जारी एसीसी अण्डर १६ प्रिमियर क्रिकेटमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियासामू १६२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ४० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर...
दिल्लीमा इबोला देखिएपछि सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाकामा सतर्कता
भीमदत्तनगर, ४ भदौ । छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीमा इबोला भाइरस देखिएपछि सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाका गड्डाचौकीमा सतर्कता अपनाइएको छ । भौगोलिक दूरीका हिसाबले गड्डाचौकीबाट भारतको राजधानी दिल्ली ३३१ किलोमिटर मात्रै टाढा छ । दिल्लीमा पनि इबोलाको भाइरस देखिएको...
पाल्पाको पानीले हैजा र झाडाबान्ता लाग्ला !
पाल्पा, ४ भदौ । पाल्पाको सिद्धेश्वरमा एक साताअघि झाडाबान्ता फैलिएको गाउँको पिउनेपानीमा ‘कोलिफर्म’ नामक जीवाणु भेटिएको पुष्टि भएको छ । गाउँका झण्डै सय घरले पिउने पानीको नमुना परीक्षण गर्दा त्यस्तो जीवाणु भेटिएको हो ।...
छब्बीस सभासद् मनोनयन सहमतिमा : मन्त्री रिजाल
विराटनगर, ४ भदौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले संविधानसभामा मनोनित हुन बाँकी २६ सभासद्को टुङ्गो लगाउन सरकारले दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री रिजालले विराटनगरस्थित आफ्नै...
गुण्डा नाइके चरीका मुख्य सहयोगी पक्राउ, अरु पनि प्रहरीको खोजीमा
काठमाडौं, ४ भदौ । नेपाल प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारिएका डन दिनेश अधिकारी चरीका मुख्य सहयोगीलाई गिरफ्तार गरेको छ । ‘डार्लिङ डन’ उपनामले चिनिने मकवानपुरका २३ वर्षीय अजयकुमार कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । चरीका मुख्य...
« 1 … 6,029 6,030 6,031 6,032 6,033 … 6,286 »
ओस्कार जितेका निर्देशकलाई बलात्कारको आरोप